शौच गर्न गएकी किशोरी बलात्कृत ! एकजना पक्राउ,अर्का फरार « Nepal Bahas
शौच गर्न गएकी किशोरी बलात्कृत ! एकजना पक्राउ,अर्का फरार
प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:३०
१२ कार्तिक, सप्तरी । एकातिर शहर र राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा बटुवा र यात्रुले चर्को समस्या झेल्नुपरेको छ भने अर्कातिर ग्रामीण भेगमा किशोरीहरू बलात्कृत भइरहेका छन् ।
पीडित १७ वर्षीया किशोरीकी आमा र पीडित १९ वर्षीया किशोरीले लिखित उजूरी दिइन । दशैंँको बिदालगत्तै सप्तरी जिल्ला अदालत खुलेपछि आरोपितविरुद्ध म्याद थप गरिने प्रनाउ सिंहले बताए ।